नारायणगोपाल चोकमा पारसको उद्दण्डता, हेलमेट लगाऊ भन्दा प्रहरीमाथि हातपात (भिडियो) – Nepal Press
२०७८ साउन १५ गते २१:३६
काठमाडौं । बेलाबेला उपद्रो र अनौठो गतिविधिका कारण विवादमा आइरहने पूर्वयुवराज पारस शाहले आज फेरि प्रहरीसँग लफडा गरेका छन् । हेलमेट नलगाइ मोटरसाइकलमा हिँडेका पारसलाई अघि साँझ साढे ७ बजेतिर नारायणगोपाल चोकमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि उनले उद्दण्डता देखाएका हुन् ।
सञ्चारकर्मी गणेश बुढाले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा हेल्मेट लगाउन अनुरोध गर्दा पूर्वयुवराज शाहले उल्टो प्रहरीलाई धम्क्याएका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरी चौकी लैजान खोज्दा पारसले एकहोरो जान्न, जान्न, जान्न भनेर प्रतिवाद गरेका छन् । उनले ‘तैले भन्दा जाने ?’ भनेर धम्क्याएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
समर्थकहरूले नारावाजी गर्दै प्रहरीको साथबाट छुटाएर लगेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय महाराजगञ्जले भने यो त्यस्तो ठूलो घटना नभएको बताएको छ । त्यहाँका एक अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘खासै ठूलो घटना होइन । चार/पाँच मिनेटको घटना हो । सम्झाईबुझाई पठाइदिएका छौ । अहिले सबै ठीक भइसक्यो ।’
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रवक्ता एसपी सञ्जिव शर्मा दासले धेरै सञ्चारकर्मीको फोन आए पनि घटनाबारे जानकारी नभएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तपाईंजस्तै धेरैजनाको फोन आयो । मलाई पनि जानकारी छैन । महाराजगञ्जको ट्राफिकसँग बुझ्दा पनि जानकारी छैन भन्ने खबर आयो । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज पनि बेखबर छ ।’
तर आफूले भिडियो भने भर्खरे हेरेकोले यसबारेमा बुझिरहेको एसपी दासले बताए ।
#पूर्वयुवराज पारस शाह
प्रकाशित: २०७८ साउन १५ गते २१:३६
4 thoughts on “नारायणगोपाल चोकमा पारसको उद्दण्डता, हेलमेट लगाऊ भन्दा प्रहरीमाथि हातपात (भिडियो)”
देशको सर्बोच्च ब्यक्ति ले यो ब्यबहर गर्नु दुखकाे कुरा हाे।
Who is Sarbochha? that druggist Paras?
को हो सर्वोच्च व्यक्ति ? कहाँको सर्वोच्च व्यक्ति ? अनि नियम कानून भन्ने मान्छे अनुसार फरक फरक हुन्छ ?
शन्ती रम पोउदेल says:
पारस जस्तो एउटा गुण्डाका पछाडि लागेर पारस दाईलाई गाडी चाहियो भन्दै केटाहरु उफ्रिनु , पारसले आफ्नो हैसियत गुमाउनु दुखद कुरा हो।